Professionals - Quit Partner
Caawi Dad badan inay iska Joojiyaan
Caawi Joojinta La-Qabsashada Nikotiinka
Hel habab badan aad uga ciyaarto door firfircoon ka caawinta dadka inay iska joojiyaan sigaar cabista, cabista sigaarka elektrooniga iyo isticmaalka walxaha kale ee tubaakada ganacsiga.
Ilaha Xirfadleyaasha Daryeelka Caafimaadka
Xirfadle daryeel caafimaad ahaan, Waxaad ka ciyaareysaa door muhiim ah caawinta bukaankaaga iska joojinta sigaar cabida. Kala hadal isticmaalkooda tubaakada, ka wacyigeli saameynta ay ku leedahay caafimaadka iyo, haddii ay diyaar u yihiin u gudbi barnaamijkeena.
Sida loo soo Gudbiyo Bukaanada
Koorsooyin/Casharo CE oo Lacag La’aan ah oo Habboon
Taxanahan cusub ee koorsooyinka/casharada kooban ee dijitaalka ah waxay ka hadlayaan mowduucyo kala duwan oo khuseeya Xirfadlayaasha Daryeelka Caafimaadka ee Minnesota—laga bilaabo waxa ku cusub tubaakada ganacsiga illaa iyo ilaha iska joojinta tubaakada. Mid kasta waxaa maalgaliyay Waaxda Caafimaadka ee Minnesota iyo Quit Partner, oo waxaa abuuray National Jewish Health.
Wax Ka Baro Koorsooyinka/Casharada CE
Fayo-qabka waa Faa'iido Shaqaale oo Weyn
Laga bilaabo dhibaatada neefsashada illaa iyo xaaladaha caafimaad ee aadka u sii daran, isticmaalka tubaakada wuxuu saameyn ku yeelan kara caafimaadka shaqaalaha, wax soo saarkooda iyo waxqabadkooda. Barnaamijkeena lacag la’aanta ah, ee aan xukunka lahayn waa hab aad u wanaagsan oo looga caawiyo inay ka baxaan la qabsasahada si kama dambeys ah.
Eeg Ilaha Dheeraadka ah
Ku Dar Iska Joojinta Qorshaha Casharka
Dhallinyarada waxay la kulmaan cadaadis nooc kasta leh—oo ka imanaya waalidiinta, saaxiibbada iyo warbaahinta bulshada—oo laga yaabo inay cabaan sigaarka elektrooniga ama cabaan sigaar si ay u la tacaalaan istereska. La kulan ardaydaada meesha ay ku sugan yihiin, oo waxaad siisaa ilo ku caawiya inay iska joojiyaan marka ay diyaar u yihiin.
Sida aan Uga Caawinno Dhallinyarada Iska Joojinta
Ka Dhig Iska Joojinta Yool Xaafadeed
Milkiilayaasha guryaha, ururrada ku saleysan caqiidada iyo xarumaha fayo-qabka ayaa ka caawin kara xubnaha bulshada inay iska joojiyaan.
Soo Gudbi Xubnaha Bulshada